अमेरिकामा अनौठो अफर, कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउँदा निःशुल्क गाँजा ! – Mission Khabar
अमेरिकामा अनौठो अफर, कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउँदा निःशुल्क गाँजा !
मिसन खबर २५ जेष्ठ २०७८, मंगलवार २२:५७
यस्तो अनौठो अफर ल्याउने वासिङ्टन पहिलो राज्य भने होइन । एरिजोनामा पनि खोप लगाएवापत गाँजा दिने अफर ल्याइएको थियो । केही राज्यले बियरको अफर समेत गरेका थिए । हालसम्म वासिङ्टनमा ५८ प्रतिशत जनाले कम्तिमा एक डोज खोप लगाएका छन् भने ४९ प्रतिशतले दुवै डोज लगाएका छन् ।